E Nweghị Ihe Na-atọ M Ụtọ Ka Ịkụ Bezbọl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabuverdianu Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mbunda Mexican Sign Language Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Obi na-atọ m ụtọ iso ndị na-eto eto nọ n’ọgbakọ anyị na-anọrị
Akụkọ Samuel Hamilton kọrọ
A MỤRỤ M N’AFỌ: 1928
ABỤ M ONYE: KOSTA RIKA
NDỤ M BIRI: ỊKỤ BEZBỌL NA ỊGBA CHAA CHAA RIRI M ISI
E toro m na Pueto Limọn. Ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Kosta Rika. Abụ m nke asaa n’ime ụmụ asatọ nne na nna m mụrụ. Papa m nwụrụ mgbe m dị afọ asatọ. Ọ bụzi naanị mama m zụrụ anyị niile.
A naghị m e ji ịkụ bezbọl egwu egwu. M bidoro ịkụ ya mgbe m dị obere. Mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na asatọ, esonyeere m otu òtù na-amụ otú e si akụ bezbọl. Mgbe m dị ihe dị ka afọ iri abụọ na otu, otu n’ime ndị isi anyị gwara m na m ga-aga Nikaragụa soro ndị aka ochie kụwa bezbọl. Ma, m jụrụ ịga n’ihi na mama m ejighị ahụ́ n’oge ahụ, ọ bụkwa m na-elekọta ya. Mgbe obere oge gachara, onyeisi ọzọ gwara m ka m bịa soro òtù egwuregwu bezbọl ndị na-eto eto e nwere n’obodo anyị bụ́ Kosta Rika. Na nke ugbu a, ekwetara m. Akụụrụ m òtù egwuregwu obodo anyị bezbọl malite n’afọ 1949 ruo afọ 1952. M kụrụ bezbọl na Kuba, Meksiko nakwa na Nikaragụa. M na-akụ bezbọl nke ọma. O nwedịrị mgbe m kụrụ bezbọl ugboro iri na asaa na-akwụsịghị akwụsị, enweghịkwa bọl danahụrụ m. Obi na-atọgbu m atọgbu ma ndị mmadụ na-etu m aha ma m na-akụ bezbọl.
M bikwara ndụ na-adịghị mma, ma ọ na-ewute m na m biri ụdị ndụ ahụ. Ọ bụ eziokwu na enwere m ike ịsị na enwere m naanị otu enyi nwaanyị, ma, e nwere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mụ na ha na-akpa. M na-aṅụkwa oké mmanya. Otu ụbọchị, aṅụchara m mmanya nke na mgbe m tetara n’ụtụtụ echi ya, enweghịzi m ike icheta otú m si lọta. Agbakwara m chaa chaa na lọtrị.
Mgbe m nọ na-ebi ụdị ndụ a, mama m ghọrọ Onyeàmà Jehova. Ọ gbara mbọ ime ka m soro ya bụrụ Onyeàmà Jehova, ma mbọ ya niile kụrụ afọ n’ala n’ihi na n’oge ahụ, enweghị ihe ọzọ na-echụ m ụra ma ọ bụghị ịkụ bezbọl. Ọ na-abụ m na-akụ bezbọl oge nri eruo, mụ akụkwara na-aga n’agbanyeghị na agụụ ji m. Obi m niile na-anọ n’ịkụ bezbọl. E nweghị ihe na-atọ m ụtọ ka ịkụ bezbọl.
Ma, mgbe m dị afọ iri abụọ na itoolu, emerụrụ m ezigbo ahụ́ ebe m na-achọ ịghọ bọl. Mgbe m gbakere, akwụsịrị m ịkụ bezbọl. Ma, m bidoro ịna-akụziri otu òtù na-amụ ịkụ bezbọl nọ nso n’ebe m bi, otú e si akụ bezbọl.
N’afọ 1957, Ndịàmà Jehova gwara m ka m bịa mgbakọ ha ga-enwe n’ámá egwuregwu m nọtụrụla kụọ bezbọl, agakwara m. Ná mgbakọ ahụ, m chọpụtara na ndị bịara ya anaghị eme aghara. Ha na-akwanyere onwe ha ùgwù. Ha anaghịkwa eme ka ndị bịara ile egwuregwu bezbọl. Ihe m hụrụ ná mgbakọ ahụ mere ka mụ na Ndịàmà Jehova malite ịmụ Baịbụl, mụ agawakwa ọmụmụ ihe ha.
Ọtụtụ ihe m mụtara na Baịbụl tọrọ m ezigbo ụtọ. Dị ka ihe atụ, Jizọs kwuru na n’oge ikpeazụ, ndị na-eso ụzọ ya ga-ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke n’ụwa niile. (Matiu 24:14) Ihe ọzọ m mụtara bụ na anaghị akwụ ezigbo Ndị Kraịst ụgwọ maka ozi ọma ha na-ezi. Jizọs kwuru, sị: “Unu natara n’efu, na-enyenụ n’efu.”—Matiu 10:8.
Ka m na-amụ Baịbụl, eji m ihe Baịbụl kwuru tụnyere ihe ndị m hụrụ Ndịàmà Jehova na-eme. Otú ha si agba mbọ ekwusa ozi ọma Alaeze Chineke n’ụwa niile tọrọ m ezigbo ụtọ. M chọpụtakwara na ha na-enyere ndị ọzọ aka otú ahụ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eme. N’ihi ya, mgbe m gụrụ Mak 10:21 ma hụ na Jizọs na-akpọ anyị ka anyị ‘bịa bụrụ ndị na-eso ụzọ ya,’ m kpebiri na m ga-abụ Onyeàmà Jehova.
Ma, o siiri m ike ime ihe a m kpebiri. Dị ka ihe atụ, e nwere nọmba m na-agba kwa izu na lọtrị a na-agba n’obodo anyị. M gbara nọmba a ruo ọtụtụ afọ. Ma, m mụtara na Baịbụl na Chineke kpọrọ ndị na-efe “chi Ihu Ọma” nakwa ndị anyaukwu asị. (Aịzaya 65:11; Ndị Kọlọsi 3:5) Ọ bụ ya mere m ji kwụsị ịgba lọtrị. Na Sọnde mbụ m kwụsịrị ịgba ya, ndị gbara nọmba ahụ m na-eji agba, ritere ego. Ndị mmadụ chịrị m ọchị n’ihi na agbaghị m lọtrị n’izu ahụ. Ha nyewakwara m nsogbu ka m gbaa lọtrị ọzọ, ma ekweghị m. Si mgbe ahụ gawa, enwebeghị mgbe ọzọ m gbara lọtrị.
E nwere ọnwụnwa ọzọ bịaara m n’ụbọchị e mere m baptizim ná mgbakọ Ndịàmà Jehova. Ọnwụnwa a ga-egosi ma m̀ yirila “mmadụ ọhụrụ ahụ.” (Ndị Efesọs 4:24) Mgbe m laghachiri na họtel ebe m bi, ahụrụ m enyi m nwaanyị ahụ ebe ọ nọ n’ọnụ ụzọ na-eche m. Ọ sịrị m: “Sammy, bịanụ ka anyị mee onwe anyị obi ụtọ.” Ma, m sịrị ya mba ozugbo. M gwara ya na m na-emezi ihe Baịbụl kwuru. (1 Ndị Kọrịnt 6:18) Mgbe m gwachara ya, ya asị m hapụgodinụ Baịbụl, ma bịa ka anyị mee onwe anyị obi ụtọ otú anyị si emebu. O bidoro ikwu ihe ndị gosiri na o nweghị ihe o ji ihe Baịbụl kwuru banyere ịkwa iko kpọrọ. Ma, m hapụrụ ya banye n’ime ụlọ gbachie ụzọ. Taa, obi dị m ụtọ na kemgbe ahụ m ghọrọ Onyeàmà Jehova n’afọ 1958, alaghachibeghị m n’àgwà ọjọọ ndị ahụ m na-akpabu.
Ọ na-adị m ka m dee akwụkwọ ma kọọ uru ndị m riterela n’ihi ime ihe Baịbụl kwuru. Ụfọdụ uru ndị ahụ bụ na enwere m ezigbo ndị enyi ugbu a, nwee ezigbo obi ụtọ, jirikwa ndụ m na-eme ihe bara uru.
Ịkụ bezbọl ka na-atọ m ụtọ, ma ọ bụghịzi ya ka m mkpa ná ndụ. Mgbe m na-akụ bezbọl, aghọrọ m onye a ma ama, nweekwa ezigbo ego, ma ha adịteghị aka. Ma, adị m ná mma mụ na Chineke na ụmụnna m ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Baịbụl kwuru, sị: “Ụwa na-agabiga, ọchịchọ ya na-agabigakwa, ma onye na-eme uche Chineke ga-anọgide ruo mgbe ebighị ebi.” (1 Jọn 2:17) Ugbu a, ahụrụ m Jehova na ndị ya n’anya karịa ihe ọ bụla ọzọ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ E Nweghị Ihe Na-atọ M Ụtọ Ka Ịkụ Bezbọl.